Sei kutaura husiku hwakanaka muchiGerman
Chii chinoreva husiku hwakanaka muchiGerman, unoti sei husiku hwakanaka muchiGerman? Vadiwa shamwari, ngatidzidze kutaura mitsara yekukwazisa uye zvishuwo zvakanaka, zvinova zvimwe zvezvinhu zvekutanga izvo shamwari dziri kutanga kudzidza chiGerman, zvinoenderana nenguva yezuva. Muchikamu chino, tichakuratidza mazwi akadai mangwanani akanaka, masikati akanaka, manheru akanaka, manheru akanaka muchiGerman.
Kutaura usiku hwakanaka muchiGerman kunoratidzwa se "Gute Nacht". Sezvo izwi rekuti Nacht iri zita rinoreva husiku, mavambo ayo anotorwa. Isu tambotaura kare kuti mavambo emazita echiGerman anozopihwa mazita. Mafomu ekukwazisa zvinoenderana nenguva yezuva anotevera.
masikati akanaka (masikati akanaka)
(vi: ge: t es sindete)
Mashoko ekukwazisa maererano nenguva yezuva muchiGerman ari pamusoro. Tinokushuvira iwe zvese zvakanaka mune zvako zveGerman zvidzidzo.
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa dzinenge mwedzi miviri yapfuura, muna Gumiguru 2, 11, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa munaNovember 2021, 6.
Mashoko echiGerman anotanga nemavara K
Mashoko echiGerman anotanga nemutsara T
Mashoko echiGerman anotanga nemutsamba W